Kusukela Wikipedia khulula
Hhayi kudidaniswe ukuphrinta screen.
Isikrini ukuphrinta kuyinto yokunyathelisa lapho anezikhala isetshenziswa ukuze uthumele inki ungene substrate, ngaphandle ezindaweni wenza eliqinile ukuze uyinki ngu-stencil ekuvimbeni. A blade noma squeegee idluliswa esikrinini ukugcwalisa evulekile anezikhala apertures ngoyinki, futhi unhlangothi reverse ke ebangela esibukweni uthinte substrate okwesikhashana ngakujantshi lokuxhumana. Lokhu kubangela inki ukumanzisa substrate futhi wadonsa aphume apertures anezikhala njengoba kwesikrini Uyavela emuva ngemva ikhaba lidlulile.
Isikrini ukuphrinta futhi indlela stencil lwembhalo ukwenziwa lapho umklamo ibekwa phezu isihenqo polyester noma ezinye anezikhala elicolekileyo, bephethe izindawo elingenalutho camera nemiyo eliqinile. Uyinki uphoqelekile wacwila ukuvuleka anezikhala ngu ikhaba yokugcwalisa noma squeegee futhi ogelezayo nokumanzisa substrate, idluliselwe phezu kwaleyo ukuphrinta ngesikhathi unhlangothi squeegee. Njengoba esibukweni rebounds kude substrate uyinki uhlala ku substrate. It yaziwa nangokuthi usilika-screen, isikrini, serigraphy, futhi serigraph zokunyathelisa. Omunye umbala libhalwe ngesikhathi, izikrini eziningana ukuze kungasetshenziswa ukukhiqiza umfanekiso emibalabala noma design.
Kukhona imigomo ahlukahlukene esetshenziselwa lokho kusala inqubo efanayo. Ngokwesiko inqubo wabizwa ngokuthi wokunyathelisa kwesikrini noma silkscreen ukuphrinta ngoba kasilika lalisetshenziswa inqubo ngaphambi kokusungulwa polyester anezikhala. Okwamanje, zokwenziwa izindikimba ngokuvamile esetshenziselwa ukwenza esibukweni inqubo zokunyathelisa. Kwamanetha ethandwa kakhulu ekusebenziseni jikelele eyenziwe i-polyester. Kukhona okubalulekile ukusetshenziswa anezikhala izinto inayiloni futhi insimbi engagqwali atholakale iphrinta esibukweni. Kukhona futhi izinhlobo ezahlukene usayizi anezikhala okuzokwenza ukunquma umphumela futhi bheka we design eqeda indaba.
Ukuze uthole olunye ulwazi mayelana nomlando wokunyathelisa kwesikrini, sicela uye ku https://en.wikipedia.org/wiki/Screen_printing
isikhathi Iposi: May-27-2018